Terraria ga-emelitere na 1.3 redesigned maka mobile na August 26 | Gam akporosis
Terraria kpam kpam redesigned maka mobile na August 27 na mmelite 1.3
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke nnukwu sandbox a na-akpọ Terraria nke ị nwere ike ime ihe niile, dị njikere ịnata nsụgharị 1.3 nke na-eweta redesign zuru ezu maka ekwentị mkpanaaka iji megharia ka imetụ ihu wee nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ Re-Logic kere.
Ugbua na vidiyo nke bipụtara ụbọchị ole na ole gara aga ihe kachasị Terraria hapụrụ a omimi kpam kpam maka mobiles na ụfọdụ njikwa na anyị enwebeghị ike ịnụ ụtọ na nsụgharị ndị gara aga; egwuregwu anyị nwere na gam akporo ruo ọtụtụ afọ na nke ahụ bụ akụkọ akụkọ na PC.
1 Na enigmatic video
2 27 Ọgọst bu ubochi buru ibu
Na enigmatic video
Agobọchị gara aga, anyị nwere ike ịhụ vidiyo nke Terraria maka gam akporo na kpaliri anyị naanị otu ihe: ya interface bụ kpam kpam ọhụrụ; Bịanụ, ọ dị ka egwuregwu ọzọ. N'ezie, a na-akpọ vidiyo ahụ "Mobile Terraria: An Enigma".
Ihe ịtụnanya mbụ na vidiyo a bụ nnukwu ọdịiche dị n'etiti njikwa njikwa n'etiti ụdị nke anyị nwere ugbu a na gam akporo, yana ọ bụ naanị otu egwuregwu ahụ maka PC na ogwe ngwaọrụ n’elu na ihe ndị ọzọ, na nke ahụ ga-abụ mgbe Terraria maka mkpanaka ka emelitere na August 27.
En mbipute 1.3 anyị nwere raara onwe ya nye interface maka mobiles na mkpisi njikwa na aka ekpe, dịka otu maka PUBG Mobile, nwere ọtụtụ ụzọ mkpirisi na ihe ga-abụ oge ịse, gbagoo na bọtịnụ ndị ọzọ dị n'akụkụ aka nri. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike igwu egwu na aka anyị abụọ iji bụrụ oke osimiri nke nka mgbe anyị gwupụtara, wuo ma chọpụta ụwa anwansi nke Terraria.
Na gara aga mbipute nke Terraria maka gam akporo
Ihe ndị ọzọ bụ ihe dị iche iche na ngwa agha anyị nwere ike Nwee na ogwe ngwaọrụ dị n'akụkụ aka ekpe nke elu, ndụ ndị dị n'aka nri na ihe ga-abụ ozi bara uru dị ka elekere na ụfọdụ data nwere ike ịba uru iji tinye onwe anyị n'ụwa nke a na-emepụta aghara aghara ka anyị na-enyocha ya! on, ha rụpụtara ya!
27 Ọgọst bu ubochi buru ibu
Re-uche ewepụtabeghị mgbanwe niile ga-abata na mbipute 1.3, ọ bụ ezie na o nyela ụfọdụ akara ngosi banyere interface na ị maraworị. Ha ekenyela nkọwa ndị akwadoro ka ị nwee ike igwu na gam akporo:
Android 4.3 ma ọ bụ karịa
Mepee GL ES 3.0
1,5 GB ma ọ bụ karịa nke RAM
na opekempe achọrọ bụ:
1 GB nke Ram.
Ọ baghị uru ikwu, ọdịnaya niile ga - abata na mbipute 1.3 nke Terraria ọ ga-abụ n'efu maka ndị nwere nnukwu egwuregwu a by Onyeka Onwenu Ọ bụrụ na ị nwere ya si na ebe na a otutu ájá, ị nwere ike ugbua inwe echiche na ị na-aga nwere a Terraria njikere maka ekwentị mkpanaaka laghachi na-enwe niile furu efu ahụmahụ na mobile tụnyere ndị PC version.
A aha na-aga n'ihu na-mepụtara ya mmepe na na na-ekwe nkwa a otutu fun na ndị ọzọ ọdịnaya ga-apụta n’ime ọnwa niile. Dị ka ọ bụ sandbox, ọ na-enye ohere nke a na mmelite iji bulie ahụmịhe ahụ n'onwe ya ma nye onye ọkpụkpọ ụdịdị ọhụụ na usoro eji enwe ọ gameụ egwuregwu kachasị amasị ha; ọ dị ka ọ mere Minecraft na oge karịrị ọbụna nwere oke osimiri na ihe niile ọ gụnyere. N'ezie anyị na-eche ọbịbịa nke Minecraft Earth, aha ohuru sitere na Mojang nke ejiri agwakọta ya na Augmented Reality ụdị Pokémon GO, ọ bụ ezie na ọ nwere ihe ole na ole.
siendma ọ bụ Fans Fans, anyị na-agụta ụbọchị ole na ole na-anọgide na-ike a ụwa na-enwe otu nke kasị mma sandboxes na anyị nwere maka anyị gam akporo igwe. Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara na ị maghị egwuregwu a, gaa na-akwadebe ihe karịrị 5 euro na ọ na-efu na ọdịnaya niile site na ịkwụ ụgwọ na enweghị ego agbakwunyere. Dị ka ọ kwesịrị ịdị n'ebe onye ọ bụla nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Terraria kpam kpam redesigned maka mobile na August 27 na mmelite 1.3
Xiaomi, Oppo na Vivo na-arụkọ ọrụ ọnụ na ihe ngwọta ịkekọrịta faịlụ site na nso